उपलब्ध ओपेरा ११.11.60० | लिनक्सबाट
उपलब्ध ओपेरा ११.11.60०
होईन खुला स्रोत, तर यो छिटो, राम्रो र नि: शुल्क हो। ओपेरा पछाडि खडा क्रोम र अगाडि सफारी प्रयोगकर्ताहरूको संख्या, प्रदर्शन र गति को सर्तमा।
यस संस्करणका समाचारहरू रोचक छन् (आधिकारिक साइट बाट लिइएको):
नविकरण स्टीयरिंग बार: ठेगाना बार नयाँ खोज सुझावहरूको साथ सुधार गरिएको छ र तपाईंलाई परिणामहरूको सूचिमा तपाईंको मनपर्ने वेबसाइट छिटो फेला पार्न मद्दत गर्दछ। बुकमार्क वा द्रुत डायल पृष्ठहरू तुरून्त, केवल ठेगाना क्षेत्रमा स्टार थिच्नुहोस्।
नयाँ रेन्डरिंग ईन्जिन: ओपेरा 11.60 छिटो र अधिक स्थिर इन्टर्नेट अनुभव प्रदान गर्दै, रेन्डरिंग ईन्जिनमा महत्त्वपूर्ण वृद्धि प्रदान गर्दछ। सुधारिएको वेबसाइट अनुकूलता, छिटो पृष्ठ लोडि,, र ब्राउज गर्ने समग्र स्थिरताको उच्च स्तरको मजा लिनुहोस्।
मेल ग्राहकमा नयाँ डिजाइन: ब्राउजरको निर्मित ईमेल ग्राहक ओपेरा तपाईंलाई स्वचालित रूपमा तपाईंको सन्देशहरू प्रबन्ध गर्न अनुमति दिन्छ। मा ओपेरा 11.60हामीले धेरै सुधारहरू गरेका छौं, जस्तै क्लिनर रूपरेखा, सन्देशहरूको समूह, तपाईंको इनबक्सको अधिक सहज प्रदर्शन, र सजिलो नेभिगेसन।
यी परिवर्तनहरू बाहेक, अन्यहरू थप गरियो: पूर्ण समर्थनका लागि ECMAScript २०१। y XMLHttp अनुरोध स्तर २, का लागि पूर्ण समर्थन रेडियल ग्रेडियन्ट y दोहोरिएको रेडियल-ढाँचा de CSS3, को लागी CSS3 उचित र SVG। नवीनताका रूपमा, यसले केहि सुविधाहरूको लागि समर्थन पनि समाहित गर्दछ CSS4.
तपाईं मा सबै परिवर्तनहरू देख्न सक्नुहुन्छ ChangeLog.
विशेष गरी मलाई के मनपर्दैन ओपेरा यसलाई खोलेर यो यसको उच्च खपत हो। तर यो वास्तवमै छिटो छ र क्यास कुनै अन्य ब्राउजर जस्तै ह्यान्डल गर्दछ।
मलाई त्यस्तै लाग्छ ओपेरा यो पहिलो प्रयोग भएको सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने ब्राउजरहरूमध्ये होइन, यो ठीक छ किनभने यो बन्द छ। म निश्चित छु कि यदि यसको स्रोत कोड पहुँच गर्न सकिन्छ भने यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ र यसको विकास धेरै छिटो हुन्छ। तर मलाई थाहा छैन नर्वेली कम्पनीले यसो नगरेको कारण के हो। के उनीहरूसँग केहि लुकाइएको छ? हामीलाई थाहा छैन।
तपाईं यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यो लिङ्क.
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » उपलब्ध ओपेरा ११.11.60०
यो खुला स्रोत होईन, तर यो नि: शुल्क, सुन्दर र निःशुल्क हो।
वाक्यांशका साथ धेरै चीजहरू:
१- के तपाईं झगडा चाहनुहुन्छ? यदि तपाइँ यो भन्न जानुभयो कि प्युरिस्टहरू यसलाई खललमा पार्छन्
२- निःशुल्क र नि: शुल्क?
HAHAHAJAJAJA, तपाईं एक प्राध्यापक हुनुहुन्छ !!!
बरु यो भारी छ
हाह किनभने तपाईलाई सानो चुटकि थाहा छैन म तपाईको लागि तयार गर्दै छु हाहाहााहा
र त्यो अवतार, तपाईं कसरी शिकार गर्दै हुनुहुन्छ? hehehehehehehe।
हाहा उसको आलोचना, तब मेरो आलोचना गर्दछ हाहाहा
कम्तिमा मेरो व्यक्तिको हिसाबले अवतार छ, किनभने म हो। कि तपाईं आफ्नो केटी को छवि संग हिंड्नु ..
इलाव १ साहसी ०
मानिस मेरो चरित्र एक मान्छे भन्दा महिलाको बढी हो, खराब भाग्य छ कि एक ...
तपाइँ मलाई यो कसरी काम गर्दछ भनेर बताउन सक्नुहुन्छ, मैले यसलाई वर्षौंसम्म प्रयोग गरिरहेको छैन।
मैले भर्खरै यो स्थापना गरें र यसले नराम्ररी काम गर्दैन, खराब कुरा के हो भने केही पृष्ठहरू राम्रोसँग रेन्डर हुँदैन र यसको मेमोरी खपत २१214.4..4 Mb मात्र हुन्छ XNUMX ट्याबहरूसँग खुला छ।
"मलाई लाग्छ कि यदि ओपेरा सबैभन्दा पहिले प्रयोग हुने ब्राउजरहरू मध्ये एक होईन भने यो ठीकसँग हो किनभने यो बन्द छ।"
मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। यो विरोधाभासपूर्ण छ, "लाभ" त्यो ओपेरा फायरफक्स हराइरहेको छ र के छोडियो "सानो फायर स्याल" ओपेराको अभाव छ। मलाई लाग्छ कि यदि त्यहाँ सम्भावना छ कि दुबै परियोजनाहरू "सँगै मिलेको" यो सबैका लागि काफी सहयोगी हुनेछ।
सबैभन्दा पहिले म तपाईंलाई तपाईंको पृष्ठमा बधाई दिन चाहन्छु, मैले यसलाई केही दिन अघि फेला पारें र यो उत्कृष्ट गुणवत्ताको जस्तो देखिन्छ। समाचारको बारेमा, तर त्यो ओपेराको साथ मलाई देखा पर्दछ कि मैले फेडोरा १ installed लाई केही दिन अघि संस्करण ११..16१, र भेडाको उपभोगको साथ स्थापित गर्‍यो जब तपाईंसँग tab वटा भन्दा बढी ट्याबहरू shoot०० एमबी भन्दा बढी खोल्दछन्, र पीसी कि मसँग घरमा केवल १ जीबी छ ... .. जुन संस्करण ११.11.51० को साथ मलाई भएको थिएन, मलाई थाहा छैन के परिवर्तन भएको छ। म ११.6० कोशिश गर्छु जब म घर पुग्छु।
धन्यवाद र स्वागत मिगुएल,
हालसालै सम्म मैले ओपेरा नेक्स्ट (v12) प्रयोग गरें र यसको निश्चित रूपमा यो उपभोग थिएन, त्यो हो, ओपेराले खपत गरेको M०० मेगाबाइटसम्म पुग्न, मैले धेरै ट्याबहरू खोल्न आवश्यक छ (लगभग १०)।
कमजोर पोइन्ट, जस्तो कि मेरो विचारमा, यो तपाई ब्राउज गर्दै हुनुहुन्छ र सबै ठीक छ, तर जब तपाइँ केही समयको लागि ट्याबहरू खोल्नुहुन्छ र बन्द गर्नुपर्दछ, यस्तो देखिन्छ कि र्याममा केहि "लोड गरिएको छ", र त्यसैले तपाइँले देख्नुहुनेछ (कम्तिमा मेरो केस यस्तो थियो) only वा tab ट्याबहरू ओपेराको साथ खुला हुन्छन् र of०० एमबी भन्दा बढीको रम खपत गर्दछ।
अभिवादन र स्वागत छ 😀
हो, म यससँग सहमत छु। अनौठो कुरा त्यो हो जुन अघिल्लो संस्करणहरूसँग भएको थिएन ... तर हे। म ओपेरा प्रयोग गर्दछ किनकि मेरो पीसीमा नौव्यू चालकको साथ, वेबकिट-आधारित ब्राउजरहरूमा पृष्ठ स्क्रोलिंग एकदम ढिलो छ, र फायरफक्समा यो अलि छिटो छ। मेरो कार्ड एनवीडिया ड्राइभरहरू द्वारा समर्थित छैन। स्क्रोलि only केवल ओपेरासँग मेरो लागि तुलनात्मक रूपमा राम्रो काम गर्दछ।
म तपाईंलाई यो पनि भन्छु कि अत्यधिक खपत एकदम जिज्ञासु छ, म यसलाई कम्तिमा चक्रमा प्रयोग गर्छु, र १० भन्दा बढी ट्याबहरू खुला छन् भने यसले १ 180० मेगाबाइटभन्दा बढी पाएको छ, र मसँग १ गीब मेमोरी पनि छ।
ठीक छ, घरमा मैले ११..11.51१ स्थापना रद्द गरें, सेटिंग्स फोल्डरहरू मेटाई दिएँ र नयाँ संस्करण स्थापना गरे। यो छिटो काम गर्दछ, अत्यधिक मेमोरी खपत हरायो, तर दुर्भाग्यवश ब्राउजर करीव to देखि १० मिनेट पछि बन्द हुन्छ। मलाई थाहा छैन कि उस्तै कुरा अरू डिप्रोसमा कसैलाई हुने छ वा छैन, तर कम्तिमा फेडोरा १5मा, यसले राम्रो काम गर्दछ। यो कारण पत्ता लगाउने समय हो ...। र फायरफक्स दिनुहोस् ...
मलाई वास्तवमा ओपेरा मनपर्‍यो, योसँग धेरै प्रो शैली रहेको छ।
मात्र यदि यसले मेमोरी यो भन्दा बढि खपत गर्दछ र धेरै पृष्ठहरू लोड गर्दैन।
ओपेरा र Chrome मेरो Fav
तीनिहरूले अझै पनि p..bug लाई ठीक गरेनन् जुन तपाईंसँग उत्प्रेरकको साथ छ, दुबै फ्ल्यास र html5 दुबै Kde संग ओपेरामा फाल्ने (फाल्ने) सँगै देखिन्छन्।
विभिन्न डिस्ट्रॉसका लागि प्याकेज खोजकर्ता